Vhidhiyo inodonha detector Apple Watch Series 4 Hollywood nyanzvi | IPhone nhau
Apple Watch Series 4 kudonha detector vhidhiyo yakatumirwa kune nyanzvi yeHollywood
Imwe yemabasa matsva eiyo Nhepfenyuro dzeApple 4 kudonha kwekuziva. Iri basa, iro rinongowanikwa mune idzva smartwatch mamodheru, rakagomadzwa kubva kuChinotangirwa uye rinongomisikidzwa chete kana mushandisi aine makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa kana kupfuura, chimwe chinhu chine musoro kubvira mukuru munhu wacho, zvakanyanya mukana wekudonha.
Chero zvazvingaitika, iro basa nyowani rinogona kumisikidzwa kana kuremedzwa paunoda uye nekudaro hatifanirwe kunetseka kana tichida kushandisa basa iri Kuti tishandise kana kuti tirege kushanda, isu tinongofanirwa kuvhura iyo Apple Watch app pane iyo iPhone, tinya iyo Yangu Kutarisa tebhu> SOS Emergency uye kumisa nekumisa Kuwa kweKutarisa. Nhasi zvatinozoona ndizvo muyedzo wakanyanyisa weiri basa neHollywood stuntman.
Kana iyo Apple Watch Series 4 ikaona kudonha kwakasimba, inogona kutibatsira kubatana neve emergency services kana zvichidikanwa uye isu hatikanzure kufona kare nekutsikirira "Hongu, asi ini ndakanaka" kana "Handina kudonha" .. Izvi zvinogoneka nekuda kwema sensors ayo yaanobatanidza uye iyo gyroscope iri inokwanisa kuyera kusvika makumi matatu nemaviri akasiyana maG, kusarudza izvo zvinogona kukonzerwa nekurovedza muviri kana kufamba kamwe kamwe, uko kunokonzera kudonha pasi. Ngatitarisei vhidhiyo yemiyedzo iyi kubva kune nyanzvi uye titarise mashandiro ayo zvakare:
Chinhu chakanaka pamusoro pevhidhiyo ndechekuti vanoisa uku kuona kwekudonha zvakanyanya uye kunyangwe Apple pachayo yatotaura kare pawebhusaiti yayo: «Apple Watch haigone kuona madonhwe ese. "Kunyanya paunenge uine simba panyama, ndipo panowanzoita kuti basa rekuona kudonha riitwe nekuita mafambiro epamusoro-soro anogona kunge achidonha." Saka chinhu ichi chinofanira kutarisirwa, asi kushanda kunoshanda uye zvakanyatsonaka munzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 4 kudonha detector vhidhiyo yakatumirwa kune nyanzvi yeHollywood
Genius ichapa mazwi kuApple Music
Luna Ratidza, chishongedzo chinotibvumidza kushandisa yedu iPad seyechipiri skrini yeMac, ikozvino yavapo